Kubvumbi 12, 2021
Mutungamiri wePTUZ, Dcotor Takavafira Zhou
Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers’ Union, PTUZ, riri kupomera bazi rezvedzidzo yepasi mhosva yekunyepa kuti rakanga rakagadzirira zvakakwana kudzivirira Covid-19 muzvikoro richiti huwandu hwevana vechikoro vari kubatwa neCovid-19 huri kukwira zvakanyanya.
Sangano iri rinoti bazi redzidzo yepasi harina kupa mashoko echokwadi kudare remakurukota, izvo zvakazoita kuti dare iri rienderere mberi nekubvumidza kuvhurwa kwezvikoro, kunyange hazvo pakanga pasina humbowo hwekuratidza kuti zvikoro zvakanga zvakagadzirira.
PTUZ inoti zvikoro zvinosanganisira Prince Edward High muHarare, Dove Sec School iri kuMberengwa kuMidlands, Sacred Heart Primary School neSacred Heart High School kuEsigodini mudunhu reMatabeleland South, Girls College muBulawayo, Umzingwane High School iri kuMatabeleland South neMzilikazi Primary School iri muBulawayo, zvine vana vanodarika mazana matatu vakawanikwa vaine denda iri.
Mutungamiri wePTUZ Doctor Takavafira Zhou, vanoti kukwira kwehuwandu uku kunoreva kuti vana nevarairidzi vakangobva kuzororo vaine hutachiwana vachihutakura kuenda nahwo kuzvikoro.
Doctor Zhhou vanoti dai hurumende yakasimbisa mitemo yeWorld Health Organisation dai dambudziko iri rakadzivirirwa nekuti vana vaive nechirwere vaikwanisa kuvhenekwa vasati vatapurira vamwe.
Mutungamiriri wePTUZ uyu anoti dambudziko iri rinogadziriswa chete kana hurumende, varairidzi pamwe nebazi redzidzo vaisa misoro pamwechete kuti vatore gwara rinozopa kuti chirwere ichi chisatapuriranwa muzvikoro.
"Chingapa chete kuti tione kuti chirwere ichi chisatapuriranwa kutoona kuti tatesita varairidzi, vana vezvikoro nevamwe vashandi vanenge vari parizvikoro. Ndo zvatinoona sezvikurukuru zvinofanirwa kuti zviitike nekuti health and safety yevarairidzi nevana vechikoro inofanirwa kuti ichengetedzwe," vanodaro Doctor Zhou.
Asi vachipindura mashoko ePTUZ aya, mutauriri webazi redzidzo yepasi VaTaungana Ndoro, vaudza Studio 7 bazi redzidzo yepasi rinomira neshoko raro rekuti hurongwa hwarakaisa muzvikoro hwekudzivirira kupararira kweCovid-19, hweStandard Operating Procedures, huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nahwo.
VaNdoro vatiwo bazi ravo richishanda pamwechete nebazi rehutano vakwanisa kumisa kupararira kweCovid-19 muzvikoro zvishoma zvanga zvabatwa nedambudziko iri.
Vatiwo svondo rino bazi ravo riri kutumira nyanzvi muzvikoro kuti dzinoona kuti dziri kutevera here mitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19 kuitira kuti dzidzo isakanganisika.